Pipe Izesekeli, Hvac, Shower Drain - Ningbo Runner
I-Ningbo Runner Emkhakheni wezinto ezintsha, ukwelashwa okuluhlaza okotshani, ukuhlanzwa komoya, i-air system entsha, ubuhlakani njalonjalo, ngokuthembela esikhungweni sokucwaninga ngamabhizinisi nakucwaningo nentuthuko design isikhungo, i-WRNWRN inamalungelo obunikazi wokusungula angaphezu kuka-100, amalungelo obunikazi bemodeli, amalungelo obunikazi wokubukeka nokunye.
Sithuthukise imigqa yokukhiqiza yokukhiqiza efana nokubumba okuhlakaniphile, ukwelashwa okuluhlaza okuluhlaza kanye nenhlangano ehlakaniphile, futhi siye saqaphela kancane kancane ukuhlanganiswa kwemininingwane yohlelo lokukhiqiza lwe-MES, uhlelo lwe-PLM kanye nohlelo lwe-ERP, kanye nendawo enkulu yokuhlinzekwa kwezinto ezintathu-ntathu futhi kakhulu uhlelo lokulawulwa kokuthengwa kwempahla oluhlelekile.
Sesidlulile isitifiketi sohlelo lokuphathwa kwekhwalithi le-ISO9001 futhi sidlulise izinga lohlelo lokulawulwa kokuhlanganiswa kwezindlela ezimbili loMnyango Wezimboni Nobuchwepheshe Bolwazi.
Ngokukhetha ngokuqinile abahlinzeki abavela ngaphandle kanye nokwenza imigomo yokusebenza kwempahla ezingeni langaphakathi, sakha inethiwekhi ehlelekile yokuthengwa kwempahla kanye nezinsizakusebenza zabahlinzeki Lokhu kunciphisa ngempumelelo izindleko zokuthenga futhi kuthuthukise ukusebenza kahle kokukhiqiza kanye namandla wokulethwa komkhiqizo.
Kuqondile Aluminium Buyisela Ai ...
Kuqondile Aluminium Floor Reg ...
Izinkuni Bhalisa Flushmount Fl ...
Plastic Bhalisa Louvered F ...
Izinkuni Bhalisa Oak Floor Lou ...
Steel Baseboard Buyisela Umoya ...
I-Ningbo Runner, eyasungulwa ngo-2002, iyinkampani ephethwe yi-Runner Group. Namuhla singumkhiqizi ophelele ohlanganisa ucwaningo, ukuklama nokukhiqiza, futhi ngaphakathi ku-Ningbo ku-140,000 metres square yokukhiqiza nendawo yokugcina impahla. Ngokuya ngocwaningo lwethu oluqinile lobuchwepheshe kanye namandla wokukhiqiza asebenza kahle, futhi nobudlelwano obunobunye namakhasimende ethu, sakhe igama lethu emhlabeni jikelele. sihlinzeka ngemikhiqizo ehlukahlukene ehlanganisa amapayipi, i-HVAC, imboni yehadiwe, futhi imikhiqizo yethu imboze iNyakatho Melika, iYurophu, iMiddle East kanye neNingizimu Melika.Njengumkhiqizi ofanelekayo we-OEM / ODM, umgijimi uzinikele ekuvuseleleni izinqubo ezintsha zokukhiqiza, ukuthola izindlela zokwenza ngcono imikhiqizo ekhona, ukudala okusha kwemikhiqizo emisha yezimakethe ezintsha nokuphendula